Mediam-bahoaka · Septambra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Mediam-bahoaka · Septambra, 2019
Pejy 3 amin_ny 10
Tantara mikasika ny Mediam-bahoaka tamin'ny Septambra, 2019
Efa noderain'i Homer indray maka, mihavery hazo ka mihasola ny tendrombohitra Ida ao Torkia
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana21 Septambra 2019
Mamondrona ny heriny ny mpikatroka sy ny artista ao Torkia hiadiana amin'ny fandripahan'ny orinasa mpitrandraka ny ala.
Madagasikara21 Septambra 2019
Ao Madagasikara, iray amin'ireo firenena mahantra indrindra manerantany, mbola ho ela vao hiharihary izany hoe mandeha any an-tsekoly. Ny ampaha-efatry ny ankizy monja no mandeha any an-tsekoly, ary tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 35 isanjaton'ny mponina, ary miala ny nosy ireo olona vitsy nandia-fianarana.
Ejipta: Bilaogera misalasala (2009)
Mitaky fahaizana mandanjalanja, fandeferana, ary fahamarinana ny fisalasalana. Nisafidy ny hisalasala i Mona Eltahawyary ary mangataka amin'ny olona mba hisafidy vahaolana i Amr Gharbeia.
Fantaro i Sam Oyeyele, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 18 ka hatramin'ny 24 Septambra
Antsafa20 Septambra 2019
Fantaro bebe kokoa ny momba an'i Sam Oyeyele, ilay hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny 18-24 Septambra 2019. Hizara ny fomba fijeriny momba ny fiteny Yoruba izy.
Fantaro i Candace Kaleimamoowahinekapu Galla, mpampiantrano ny kaonty Twitter-n'ny @NativeLangsTech ny 19 – 25 Septambra
Antsafa19 Septambra 2019
Fantaro misimisy kokoa i Candace Kaleimamoowahinekapu Galla, mpampiantrano ny kaonty Twitter-n'ny @NativeLangsTech ny 19-25 Septambra, 2019. Ho zarainy amintsika ny fomba fijeriny ny hoavin'ny fiteny ʻŌlelo Hawaiʻi (fiteny Hawaiian ).
Mpivarotra lamba ‘kanga’ mampiavaka an'i Zanzibar nandritra ny 30 taona nasaina niala eny amoron'ny arabe
Afrika Mainty19 Septambra 2019
Nolazaina ireo mpivarotra Kanga ao Stone Town, Zanzibar, fa "fandraharahana tsy nahazo alalana, tsy ara-dalàna" ny toeram-pivarotan'izy ireo eny amoron-dalana satria manelingelina ny fidirana sy ny hankaton'i Stone Town ary mampihena ny lanjany ihany koa, ka nasaina niala tao izy ireo.
Randram-baovao Twitter malaza manasongadina ireo ohatra maritrano PoMo ampolony tamin'ny ’vanim-potoanan'ny tapoaka‘ tao Japan
Azia Atsinanana19 Septambra 2019
Ahitana maritrano postmaoderina avokoa ny kihondalana rehetra manerana an'i Japan
‘Voninahitra ho an'i Hong Kong': Hira fanevan'ny hetsi-panoherana
Azia Atsinanana18 Septambra 2019
Tsingerintaona faha-70 an'ny Repoblikam-bahoaka ao Shina ny 1 Oktobra. Raha miomana amin'ny lanonana ofisialy ny governemanta Hong Kong, Hong Konger an'aliny kosa no mampiseho hira fanoherana vaovao eny an-dalambe sy eny amin'ireo toeram-pivarotana manerana ny tanàna.
Matahotra ny handefa ny ankizy hiverina an-tsekoly ao anatin'ny ady mitam-piadiana ireo ray aman-dreny Kameroney
Afrika Mainty18 Septambra 2019
Any Kamerona, nampiasa ny fanaovana ankivy ny sekoly ireo separatista ho adi-varotra. Namono sy naka an-keriny ireo mpampianatra tany amin'ny faritra miteny Anglisy ireo mpiady mba tsy hanokafana indray ny sekoly raha tsy voavaly ny fitakiana.
Mety hiatrika “sazy ho faty” ny Kameroney satria mandrahona hanala ny fanafody antiretroviral ny Global Fund
Afrika Mainty17 Septambra 2019
Matahotra ny tsy fisian'ny fanafody ARV intsony ireo Kameroney miaina amin'ny VIH satria mandrahona hanala izany ny Global Fund noho ny fitomboan'ny trosan'i Kamerona efa ho 47 tapitrisa dolara.